अलबिदा हावी | मझेरी डट कम
kbs — Wed, 06/02/2010 - 19:15
भेस्डिङ मेसिन (पैसा खसालेर बटन दबाउने मेसिन) बाट दुईवटा चिसो कोकको बोतल झिक्यो र एउटा मतिर बढायो । अर्को बिर्को खोलेर एक घुटको पियो । जुन महिनाको प्रचण्ड गर्मी थियो । खेतमा कुनै बाली लगाइएको थिएन, सायद लगाउने तयारीमा जुटेका थिए किसानहरू । किनकि छाता ओढेर अथवा ठूलो आकार भएको हृयाट लगाएर खेतमा केही काम गर्दै थिए ।
सहरबाट तीन-चार किलोमिटर टाढा एउटा कम्पनी थियो । त्यहाँ काम गर्ने मान्छे खोजेको छ भन्ने थाहा पाएपछि बिक्कीले आफ्नो साथीसँग त्यहाँ गएर बुझ्ने काम अह्राएको थियो । उसको साथी उसकै कम्पनीमा राति काम गर्दथ्यो र दिउँसो सुत्ने गर्दथ्यो । बिहानको दस-एघार बजेतिर उसले साइकल लिएर आयो र त्यहाँ जानलाई सोध्यो । दिउँसोको गर्मी साइकल यात्रा मेरो त होस उड्लाजस्तै भयो । तर बाध्यता थियो । कामको जरुरत, अपरिचित ठाउँ, उसको समय । चुपचाप आफ्नो साइकल डोर्याएर उसको पछि लाग्नुको अर्को विकल्प थिएन ।
सहरका पेटी साइकलयात्री र पैदलयात्रीका लागि मात्र हुन्छन् । चिल्ला सडक र चिल्ला पेटीहरू, सुविधाका लागि ठाउँ ठाउँमा राखिएका सिंग्नल र जेब्राक्रसिङहरू, सबै प्रान्त र सबै ठाउँ उत्तिकै विकसित र उत्तिकै सुविधा सम्पन्न अर्थात् सुरक्षित सडक, सुरक्षित पेटी अनि सुरक्षित यात्रा ।
अपार्टबाट निस्केर नजिकैको रेल्वे स्टेसनलाई पार गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ । ठूलो सडक सानो गल्ली अनि खुला फाँट र रहरलाग्ने गरी बनाइएका खेतका गरा, सायद धान रोप्ने तयारी हुँदैछ । खेतको बीचबाट गएको सडक पनि उत्तिकै चिल्लो र सफा छ । मनभरि आफ्नो देशको सडक र खेतबारीलाई सम्झिंदै उसलाई पछ्याउँदै छु । खेतको फाँट विस्तारै पार हुने क्रममा छ । गर्मी सहिनसक्नु छ । ठूलो फाँटलाई पार गरेपछि सानो ढिस्कोजस्तो पहाड देखा पर्यो । हामी पुग्ने ठाउँ त्यहीँ हो उसले रोकिएर देखायो ।
सडक सम्मबाट अलिअलि उकालो हुन थाल्यो । बाटाका छेउछाउमा चार पाँचवटा घर पनि भेटिए । जङ्गल पनि रहेछ । घुमाउरो बाटो उकालो सकिएपछि डाँडामा केही रुखको बीचमा सानो घर छ, त्यो अफिस वा सम्पर्क कार्यालय रहेछ । धेरै मान्छे थिए । विदेशी, स्वदेशी सबै आउँदै र जाँदै थिए । हामी पनि अरुहरू जस्तै पछि लागेर भर्याङ उक्लियौँ । एक तला माथि सम्पर्क अफिस । टेबुलको उतापट्ट िदुईजना बसेर केही लेख्दै अनि सबैको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रहरू हेर्दै थिए । आफ्नो परिचयपत्र दिइसकेपछि केके सोध्ने रहेछन् अनि कम्पनीको ड्रेस दिएपछि काम पक्का । मैले बोल्नै परेन सबै उसले बोल्यो । उनीहरूले बोलेको मैले बुझिन पनि । कुरा सकिएपछि एकजना ड्रेस खोज्न गयो, एकछिन पछि उसले आएर केके भन्यो त्यो पनि मैले बुझिन किनकि उनीहरू छिटोछिटो बोलिरहेका थिए । मसँग जाने मान्छेले चाहिँ अब हामी जाउँ, भोलि तिमी आफँै आएर डे्रस लिएर जाउ भनेपछि बल्ल थाहा पाएँ काम पाउने भएछ । उसले भनेछ तिम्रो साइजको डे्रस सकिएको छ भोलिमात्र आइपुग्छ । त्यसैले भोलि आएर ड्रेस लिएर जाउ र पर्सिदेखि मात्र काममा आउ ।
उसले शिर निहुरायो र आरिगात्तो गोजाइमास (धन्यवाद) भन्यो । मैले पनि उसकै अनुकरण गरेँ । हँसिलो अनुहार लाएर ऊ तल ओर्लियो । गोजीबाट सनग्लास झिक्यो लगायो र साइकल चढ्यो । म पनि उसको पछि लागेँ ।
उसले आफ्नो सनग्लास झिकेर कमिजको फेरले एकपटक पुछ्यो र टाउकोमा राख्यो । प्रसङ्ग मोडियोस् भन्ने मेरो चाहनाले कुरा घुमाएँ । कस्तो गर्मी छ हगि ? उसले थप्यो तिमीलाई थाहा छैन यहाँ गर्मीमा असाध्य गर्मी र जाडोमा असाध्य जाडो हुन्छ । तिमी नयाँ छौ त्यसैले यहाँको हावापानी र मान्छेका व्यवहार थाहा छैन । बिस्तारै बुझ्दै जाने छौँ । मलाई त यो ठाउँ पटक्कै मनपर्दैन म आफ्नै ठाउँमा (देश) फर्किन चाहन्छु । जतिसक्दो छिटो फर्किने छु । तर मलाई यो पनि थाहा छ कि म फर्केर गएपछि उनीहरूले छोड्ने छैनन्, पक्कै मलाई मार्नेछन् । कुरा फेरि घुम्दै उतै पुगेको छ । हावीयर बोल्दै गयो - तर म डराउँदिन किन डराउने ? देश मेरो पनि हो । म त्यहाँको नागरिक हो । उनीहरूकै जत्तिको अधिकार मेरो पनि छ । देशको माया मलाई पनि छ । त्यसो भए तिमी पहिले किन भागेको त ? अब भने मलाई पनि सोध्न मन लाग्यो । मान्छेलाई मारिहाल्न त निकै ठूलो अपराध गर्नुपर्छ, तिमीले त्यस्तो के गरेका थियौँ र यसरी खेदो खनेका छन् त ? उसको जवाफ- खासै ठूलो कुरा होइन, तिमीलाई थाहा छैन जब देशमा अशान्ति र काटमार हुन थाल्छ । सोझा र निर्दोषहरू नै बढी हुन्छन् ज्यान गुमाउनेमा । बदमास र बाठाहरू त जोगिन सफल हुन्छन् । अशान्ति र युद्धहरू तिमीहरूले देखेको भोगेको भए पो थाहा पाउँथ्यो । आफ्नै अगाडि कति आफन्तहरूको ज्यान गएको छ त्यो त हामीलाई लिभाबासीलाई मात्र थाहा छ । सुरुमा उनीहरूले गुरिल्ला आर्मीमा जान सबै युवालाई आहृवान गरे । जान नमान्नेलाई जबरजस्ती पनि उठाए । नभेटाएकालाई धम्की दिइ नै रहेका छन् । मुख्य कारण यही नै हो । अब तिमी नै भन मेरो पनि इच्छाको कुरा हुँदैन र ? त्यो त हो मेरो सरल उत्तर । तिमीहरूको देशमा त शान्ति छ नि हैन ? उसको प्रश्न व्यङ्ग गरेझैँ लाग्यो । प्रतिउत्तरमा टाउको हल्लाएँ, मुखले कतै सत्य बोलिएला भनेर मुख बन्द नै गरिरहेँ ।
मलाई उसको कुरा सुन्दा दिक्क लागिसक्यो । जति कुरा मोडे पनि घुमिफिरी उतै पुर्याउँछ । अब त आँटै गरेर सोधेँ- बेलुका काममा जानु पर्छ होला । तिमी कतिखेर गएर सुत्छौ त ? अब अलिकति हँसिलो अनुहार लगायो, बोतलमा बाँकी रहेको र विस्तारै तातिन थालेको कोक पियो र भन्यो- आज अर्कै साथीलाई सट्टामा जानु भनेको छु । भोलि मेरो छुट्टी हो आजको सट्टा भोलि काममा जान्छु । किनकि मलाई थाहा थियो यो ठाउँ टाढा छ, त्यहाँसम्म पुगेर फर्केर सुत्न ढिला हुन्छ । त्यही भएर पहिले नै कुरा मिलाएर आएको छु । अब गएर टी.भी. हेरेर बस्छु र बेलुका मात्रै सुत्छु । मलाई पनि अब आनन्द भयो । उसँग समयको अभाव छ भन्ने थाहा थियो, त्यै माथि पनि कुरोको लर्को एक पछि अर्को तानेर हैरान ।
हैन ऊ ब्राजिल को हो । एउटै अपार्ट भए पनि हाम्रो भेट कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिनमा मात्र हुन्छ । किनकि ऊ दिउँसो काम गर्दा मेरो राति हुन्छ र उसको राति हुँदा मेरो दिउँसो हुन्छ । यसरी आलोपालो हुन्छ । हामीसँगै जोडिएको अर्कोमा चाहिँ जापानिजहरू बस्छन् । त्यसको उता भने पेरुकै चारजना केटी बस्छन् । केटीहरू खाना मीठो पकाउँछन् । छुट्टीको दिन हामी पनि त्यहीँ गएर खान्छौँ । घरमै खाएजस्तो लाग्छ । नत्र सधैँ बेन्तो (जापानिज खाना कम्पनीले दिने गर्छ) खाँदा दिक्क लाग्छ । खाना त आफ्नै देशको मीठो हुन्छ । तर तिमी नेपाली पनि मीठो खान्छौँ । मसलाहरू भएको स्वादिलो खाना । मलाई मनपर्छ तिमीहरूको खाना ।
साथी मात्र होइन उ त मेरो गर्लफ्रेन्ड हो । उनीहरूकै मा त हामी छुट्टीमा मीठो खाना खान्छौँ ।
मलाई असाध्यै खुसी लाग्ने छ मारियालाई भेटेर । तिमीहरू दुवैजना हामीकहाँ खाना खानेगरी आउ है । ऊ अति खुशी भयो र मेरो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो ।
हामी बिस्तारै बाटो लाग्यौँ । खासै कुरा भएन । म एक्लै आफ्नो अपार्टसम्म पुग्न नसक्ने भएकोले उसले त्यहाँसम्म पुर्याउन जानुपर्ने थियो । बाटोभरि हावीका कुरा सम्झी रहेँ र पछिपछि हिँडिरहेँ ।
कोठामा पुगेर पनि धेरैबेरसम्म हावीयर मेरो मनमा हावी भइरहृयो । उसका शब्द कानमा गुञ्जिरहे । उसको आक्रोस, घर छोड्नुको कारण, आमा, श्रीमती छोरीहरू मारिया, उसको सहर कस्तो होला ? उसको विचार, आशङ्का भविष्यको, अनि नेपालीहरू भाग्यमानी, सुन्दरशान्त देशका बासिन्दा आदि आदि .... ।
हावीयर निकै पहिले पेरु फर्केको रहेछ । अन्त्यमा उसको भविष्यप्रतिको पूर्वानुमान या आशङ्का सत्य भएरै छोड्यो । अनि मारिया ? मारियाले पनि उसलाई धोखा दिई । उसँग भएको पैसा सबै सिध्याइदिई र अर्कै केटालाई मन पराउन थालेपछि यिनीहरूको सम्बन्ध खराब भएछ । पैसा पनि जम्मा गर्न सकेन । मारियाले गरेको विश्वासघातले ऊ साह्रै दुखी भएर खाली हात घर फर्क्यो । र केही समय पछि नै उसको हत्या भयो ।
खबर दुःखदायी थियो तर सत्य थियो । देशलाई माया गर्ने एउटा देशभक्त देशमा त फक्र्यो तर उसलाई बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । उसको त्यो अनुहार र सहयोगी विचार मलाई अझै याद छ । यति असल मान्छेको पनि यस्तो दुर्गति, पीडा र अन्त्यमा बिनाकारण मृत्यु, हत्या । विचरा ऊ कति इमान्दार थियो मारियाप्रति पनि । तर गर्न पनि के सकिँदो रहेछ र श्रद्धाञ्जलि दिनुबाहेक । मनैदेखि भन्न मन लाग्यो- अलबिदा हावी ।